MEEQA AYAAD CUNI KARTAA DHIRTA MAALIN KASTA: MAXAA DHACAYA HADDII AAD CUNTID CAGAAR BADAN MAALIN KASTA, MA JIRTAA XADKA LOOGU TALAGALAY QAYBAHA KALA DUWAN EE DADKA? - BEER CAGAARAN
Hubi in faa'iido aan laheyn wax khatar ah! Imisa ayaad cuni kartaa dhirta maalin kasta?
Dhirta waa geedo bahalka basbaaska leh, oo ah bienaalka bini-aadamka, dallad qoys. Geedka waxaa ku jira fiitamiin iyo nafaqooyin badan.
Waxaa loo isticmaalaa karinta, daawada iyo sida quruxda badan. Cunista xawaashka basbaaska leh waxay bixisaa caddadka saxda ah ee fiitamiinada iyo macdanta.
Caleemaha iyo xididka labadaba waa la isticmaalaa. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa inta aad awooddo oo aad cuni lahayd dhir maalin kasta iyo waxa dhici doona haddii aad cunaysid cagaar badan.
Ma jiraan xayiraado gaar ah dhir. Dhammaan waxay ku xiran tahay tirada, taniyo khasaarihii fiitamiinada iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku jira dhirta ayaa ku noqon kara:
Waxa kale oo jira xayiraadyo ku saabsan calaamadaha caafimaadka, waxaa looga doodi doonaa maqaalka hoose.
Imisa ayaad cuni kartaa maalintii: heerka isticmaalka
Wixii jirkeena, waa ku filan inaad isticmaasho konton garaam oo dhir udgoon maalintiiba.. Haweenka uurka leh waxaa lagula talinayaa inay si weyn u yareeyaan sicirkaan, waxaana ka wanaagsan in la iska daayo oo dhan, beddelidda celery iyo xawaashyo khudaar ah.
Xannibaadyada qaybaha gaarka ah ee muwaadiniinta
Qaybta muwaadiniinta aan lagula talin in ay cunaan dhir, dadka qaba urolithiasis, habka bararsan ee kelyaha, iyo habka caloosha iyo mindhicirka ayaa la saameeyaa.
Iyadoo taxaddar aad u ba'an, dhirta waa in la cunaa dumarka uurka leh. Cabsi ay sababtay tayada xawaashka ah si ay u yeeshaan saameyn kicin leh derbiyada ilmo-galeenka. Gaar ahaan looma talin haweenka uurka leh inay cunaan xididka dhirta, waxa ku jira nafaqooyinka ugu badan ee aan loo baahnayn xilliga uurka.
Isticmaalka dhir ee haweenka uurka leh waxay sababi karaan foosha shaqada, taasoo keenta dhicis.
Cawaaqibka isticmaalka xad-dhaafka ah ee cagaarka iyo falalka marka ay muuqdaan
Isticmaal maalinle ah. By cunista cawska basbaaska maalin kasta in tiro badan, jidhka waxaa kor u leh nafaqooyinka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee ku jira. Tani waxay keeni kartaa miyir-beel, dawakhaad.
Inkastoo dhirku yahay farmashiyaha yaryar, waa inaadan ku xadgudbin. Ku filnaan hal ama laba laamood.
Haddii isticmaalka dhirku dareemo dareen diidmo ah oo jidhka ka mid ah, waxaad u baahan tahay inaad diiddo alaabta cuntada.
Hal mar marar badan. Haddii aad isla markiiba cunayso qadar badan oo dhir ah, waxay keeni kartaa:
Marka dareemayaashani ay muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo mashiinka caloosha, wac ambalansi.
Caato ah dhir ee cuntada. Cunnooyinka cuntada ee ka maqan cuntadu ma keenayso waxyeelo badan jirka. Laakiin haddii qofku ku jiro cunto, ka dibna dhirku wuxuu jidhka ka buuxiyaa enzymes wuxuuna caawiyaa dheef-shiid. Sidoo kale waxay hoos u dhigtay joogitaanka jidhka macdanta, kuwaas oo ku jira kaliya geedkaan.
Fitamiin B9 ayaa ku jirta dhir. Dhibaatadu waxay yaraynaysaa kobaca iyo qaybinta unugyada jidhka, waxay horseedi kartaa carqaladeynta abuurista borotiinka.
Isku dar dhir leh qajaarka, yaanyada, kaabajka, majones, subagga, labeen dhanaan waxay keenaysaa sii deynta nitrit, taas oo aad u dhib badan jidhka bini'aadamka. Salads, waa suurad wacan in ay isticmaalaan cusub, afartan daqiiqo laga bilaabo xilliga diyaarinta, haddii kale dhirku lumiyo hantidiisa faa'iido leh oo wuxuu noqonayaa waxyeello cunid.
Si loo yareeyo saamaynta Nitrate ee dhir, waxaad u baahan tahay inaad ku qoyso biyo qabow muddo saacad ah.
Dheeraadka joogtada ah. Si looga hortago cawaaqib xumo, waa inaad si joogta ah u cunaa dhir, adoo intaa dheer lallabbada, dhecaanka, saxarada dhiigga, miyir-beelka, xanuunka wadnaha, qaloocsan, iyo miisaan culus ayaa lagu dari karaa.
Si looga fogaado cawaaqib xumo, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo xaddiga dhirta cuntada ee ku jirta cuntada ama si ku meelgaar ah looga tago.
Faa'iidooyinka isticmaalka dhir dhexdhexaad ah waa kuwo waaweyn oo lagama maarmaan u ah jidhka bini'aadamka. Dabeecadani waxay xoojineysaa habka difaaca jidhka, qaabka uu ku socdo, oo loo isticmaalo daawada dhaqameed, waa hab dabiiciga ah ee awoodda sii kordheysa. Waxaa la wada baabbi'iyey cayriin, la qalajiyey, lagu jajabiyey xaalad casiir ah. Waxa ugu muhiimsan ee lagu fahmo in ay faa'iido leedahay - micnaheedu maahan wax badan.